calendar 2013 “Rocking Chair” Kalenda - Imewe Mmewe
Kalenda Rocking oche bụ kalenda desktọọpụ na –eche n ’oche dị obere oche. Soro ntuziaka ichikota oche mkpọtụ na-eme ka ọ laghachi azụ dị ka ezigbo. Gosiputa ọnwa dị ugbu a n’elu oche, na ọnwa na-esote oche. Ndụ na ekike: Qualitykpụrụ dị mma nwere ike ịgbanwe oghere ma gbanwee obi ndị ọrụ ya. Ha na-enye nkasi obi nke ịhụ, ijide na iji ya. Ejiri ha dị ka ike na-eju anya na ihe ịtụnanya, na-enye ohere sara mbara. Emebere ngwa ahịa anyị nke mbụ site na iji echiche nke “Life with Design”.
Aha oru ngo : calendar 2013 “Rocking Chair”, Aha ndị na-emepụta ya : Katsumi Tamura, Aha onye ahịa : good morning inc..